urur islaami ah oo ka arrimiya goobo badan oo ka tirsan somaliya iyo qaar ka mid ah dawladaha deriska
Waxaa ay dhisantahay muddadii ka danbeysay sanadka marka uu ahaa 2003dii iyadoo ka soo dhex baxday xarakaat-kii Islaamiga ahaa ee waagaas ka hor dhismay sida Xarakada Islaax, Tajamuc al-Islaami iyo waliba xarakaatki takfiiriga ahaa ee markaa ka jiray qeybo ka mid ah wadanka Soomaaliya. Xarakaadkaan dhismay kadib burburkii Dawladda Dhexe ee Soomaaliya waxaa ay dhamaantood qabeen fikir ah in wadanku uu yeesho dowlad Islaami ah laakin shaqsiyaatka ku mideysan xarakaatkaas ayaa iyagu laf ahaantooda ku kala duwanaa sida lagu gaari karo dowlad Islaami ah oo ay Soomaaliya yeelato. Shaqsiyaadka qaar ayaa qabay in lagu gaari karo oo kaliya dowlad Islaami ah in la qaato qori oo lala dagaalo inta ka soo horjeeda taasoo dabcan ay kow ka ahaayeen. Hogaamiya kooxeedyadii ka jiray dalka Soomaaliya gaar ahaan Gobolada Koonfureed mudadi wixi ka danbeeyay burburki Xukuumaddii Siyaad Barre ilaa 2006dii. Halka shaqsiyaadka qaarna ay qabeen inaan dagaal wax lagu raadinin ee dadka laga saameeyo xaga dhaqaalaha iyo tacliinta taasoo runtii wax badan ka tartay inuu si sahlan ku faafo mabda'a xarakaatki markaas ka shaqeynayay dhanka tacliinta iyo dhaqaalaha. Kadib markii ay midoobeen Maxaakiimtii Islaamiga oo iyagu ka koobnaa shaqsiyaat kala duwan oo ku kala jirey xarakooyin kala duwan ayaa waxaa ay u sahlanaatay in ay qabsadaan inta badan Koofurta Soomaaliya waxaa la dhihi karaa inay qabsashadaas soo dedejisay ururki la magac baxay La-Dagaalanka Argagixisada iyo Soo-Celinta Nabada ee lagu dhisay xarunta Qanyare ee Degmada Dayniile 28dii, bishii 2aad 2006dii, taas oo dadka Soomaalida ah loo tusiyay in uu ururkaasi yahay mid qandaraas ku soo qaatey inuu baabi'iyo Islaamka. Waxaa ay ku soo shaac baxday baahidi dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfurta daga ay u qabeen in ay helaan nabad iyo amaan, taasoo sababtay in ay taageero buuxdo siiyaan Midowgii Maxaakiimta Islaamiga ee ka howl galayay Koonfurta Dalka sanadihii 2005tii ilaa 2006dii. qabailada tageray waxa ka mid eh 1.rer ow xassan 2.ceyr 3.marexan 4.raxaweyn
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Shabaab&oldid=218570"
Last edited on 7 Oktoobar 2021, at 13:09
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Oktoobar 2021, marka ee eheed 13:09.